भारतविरुद्ध वेस्ट इन्डिजले टस जित्यो, टिममा को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
भारतविरुद्ध वेस्ट इन्डिजले टस जित्यो, टिममा को–कोले पाए मौका?
काठमाडौंः भारत विरुद्धको टेस्ट क्रिकेट सिरिजको दोस्रो तथा अन्तिम खेलमा वेस्ट इन्डिजले टस जितेर बलिङ रोजेको छ ।
यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति ८ः१५ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । पहिलो टेस्टमा कीर्तिमानी जीत हासिल गरेको भारत यो सिरिज पनि क्लिन स्विप गर्न चाहन्छ । यता वेस्ट इन्डिज भने यो खेल जितेर सिरिज बराबरी बनाउने योजनामा छ । दोस्रो खेलमा प्लेइङ ११ मा कोकोले पाए मौका? हेर्नुस्
ट्याग्स: वेस्ट इन्डिज भर्सेस भारत